China Solar Air Conditioner, Anyanwụ Kwadoro Ngwá Ngwá Nche, Anyanwụ Gbasaa Ikuku Air Conditioner Manufacturer
Nkọwa:Onye na-ekpo ọkụ igwe,Nkwado igwe na-ekpo ọkụ nke anyanwụ,Igwe oyi na-ekpo ọkụ,Obere Obere Igwe,,
Onye na-ekpo ọkụ igwe,Nkwado igwe na-ekpo ọkụ nke anyanwụ,Igwe oyi na-ekpo ọkụ,Obere Obere Igwe,,
Home > Ngwaahịa > Ụlọ igwe / DC > Onye na-ekpo ọkụ igwe
Ngwaahịa nke Onye na-ekpo ọkụ igwe , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Onye na-ekpo ọkụ igwe , Nkwado igwe na-ekpo ọkụ nke anyanwụ suppliers / factory, wholesale high-quality products of Igwe oyi na-ekpo ọkụ R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Igwe Igwe Igwe Igwe Ala Igwe Igwe Igwe
A ghọtara ike anyanwụ dịka otu n'ime ihe kachasị mma, nchebe, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ezigbo ihe mgbapụta ndị ọzọ maka ụmụ mmadụ n'ọdịnihu. Ọ nwere uru nke ịnweta ohere, nnukwu ike, enweghị mmetọ na nchekwa dị mma. Iji ike anyanwụ na-akwọ...
China Onye na-ekpo ọkụ igwe Ngwa
N'okwu nke okpomoku zuru uwa, ike nke anyanwu, di ka onye ngosi nke ike ohuru, mba di iche iche n'uwa dum. N'okpuru mmepụta nke obere ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, ike anyanwụ nke na-adabere na nkà na ụzụ na ọkụ na-arụ ọrụ dị iche iche ma na-eme ka nrụpụta ike rụọ ọrụ mgbe niile. Usoro ikuku nke ikuku nke igwe choro ikpo oku na ncheghari nke oma, ulo oru ulo oru, ulo ogbe, ulo akwukwo, ulo ogwu, mmiri mmiri, ulo oru ndi ozo, ndi ozo, ihe ndi ozo.
Ime mgbanwe nke oge maka ikuku oyi dị mma dị mma, na ike ịdị jụụ nke usoro ahụ na-abawanye na mmụba nke ike radieshon nke anyanwụ, nke dabara na ngwa ngwa nke ndị mmadụ na-achọ ka oyi na-ekpo ọkụ n'oge okpomọkụ.
Friji condensing refrigerator Jikọọ oge dị ka onye na-ajụ, nke nwere nnukwu mmebi nke ikuku ahụ, ebe friji ahụ na-eji mmiri na-adịghị egbu egbu ma ọ bụ mmiri na-adịghị njọ ma ọ bụ lithium bromide dịka ọkara, nke bara uru na gburugburu ebe obibi.
Igwe ikuku nke mbara igwe nwere ike ijikọta okpomọkụ okpomọkụ, okpomọkụ na oyi na oge ndị ọzọ iji nye mmiri ọkụ, nke na-eme ka ntinye n'ọrụ na akụ na ụba nke ike anyanwụ.
Usoro ikuku nke igwe nwere ike ime ka ihe di omimi nke ichikota na oge okpomọkụ, ikpo oku n'oge oyi na inye mmiri onu mmiri kwa afo nile, ma we nweta onodu aku na uba, ndi mmadu na gburugburu ebe obibi na gburugburu ebe obibi, ma nwee ohere buru ibu nke ndi mmadu.
Nkwado igwe na-ekpo ọkụ nke anyanwụ
Obere Obere Igwe
Njikwa na-ekpo ọkụ nke ìhè ihu igwe